Tọ ntọala maka ihe ịga nke ọma n'ịre ahịa na 2017 | Martech Zone
Tọ ntọala maka Successga nke Ọma na 2017
Tọzdee, Disemba 20, 2016 Stephen Morgan
Ọ bụ ezie na oge ekeresimesi nwere ike ịmalite, ebe a na-eme ndokwa maka ndị ọrụ na mince achịcha na-arụ ọrụ n'ọfịs, nke a bụkwa oge iji chee echiche tupu 2017 iji hụ na n'ime ọnwa 12, ndị ahịa ga-eme ememme ahụ. ihe ịga nke ọma ha hụrụ. Agbanyeghị na CMO n'ofe mba ahụ nwere ike iku ume nke ukwuu mgbe ihe ịma aka 2016 gachara, ugbu a abụghị oge iji nwee afọ ojuju.
N’afọ gara aga, anyị ahụla ndị ọrụ ntanetị na-agbasa onyinye ha, dịka UberEats, Amazon ụlọ ahịa akwụkwọ na Apple na-egwugharị ụda okwu ekweisi, nke a emeela ka ụlọ ọrụ na-eche echiche banyere otu ha onwe ha ga-esi gbalite. Topping na ndepụta nke isiokwu ndị a tụlere kemgbe bụ Virtual Reality, akpaaka na usoro mmalite nke ịma aka iwu.
Site na mkpebi mkpebi azụmaahịa ndị a dị elu na usoro ọhụụ, a manyere ndị isi azụmaahịa ịjụ ụdị mgbanwe ha kwesịrị iche maka. Ugbu a bụ oge ndị na-ere ahịa na-atụle ihe ha ga-eme iji hụ na ahụmịhe ndị ahịa na 2017.
Ahịa bụ Key
Ọ bụrụ na mkpebi azụmaahịa nke nnukwu ụdị gosipụtara anyị ihe ọ bụla n'afọ a, ọ bụ na onye ahịa ahụ bụ isi. Nke mbụ, ndị na-ere ahịa ga-enwerịrị echiche a maka itinye ego ọ bụla na 2017. Ha kwesiri iche echiche banyere ụdị ọdịnaya ndị ahịa ha chọrọ, ihe ha ga-eme, na ikekwe kachasị mkpa, otu ha ga-esi chọọ inweta ọdịnaya a. Site n'ile anya otu ha ga esi jikota ndi ahia ha nke oma, azumahia a choro inweta otutu mmadu.
Ime Mobile ka Ihe Ndị Mkpa
Nanị ụzọ ị ga - esi soro ndị ahịa mee taa bụ site na ịbịakwute ha site na usoro ha na-ejikarị eme ihe. Na 80% nke ndị okenye UK nwere a smartphone ọ bụghị ihe ijuanya na maka ọtụtụ azụmaahịa nke a bụ ngwaọrụ dị mkpa iji ruo onye ọrụ njedebe gị. Otú ọ dị, ọ wụrụ anyị akpata oyi n'ahụ ịhụ n'oge na-adịbeghị anya Ndị na -emebi dijitalụ na-akọ na 36% nke azụmaahịa enweghị ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka. Ugbu a bụ oge ndị na-ere ahịa iji hụ na ha anaghị efu site n'ịghara ịnye nhọrọ mkpanaka, ebe ndị nweburu saịtị nwere mkpanaka kwesịrị ịlele na onyinye ha dị ka enyi-enyi dịka o kwere mee.
Kwesịrị iji otu saịtị dị mkpa dị ka ebe desktọọpụ rụọ ọrụ. Ọ ga-adị mfe ịnyagharịa, yana atụmatụ niile dị na desktọọpụ, ọ gaghị emerụ ma ọ bụ sie ike ịmegharị. Nke a na-achọ menu, scons, na toolbars ndị na-amasị anya. Ndị a ọcha kwesịrị-ekwekọ na a ezi uche okirikiri nhọrọ ukwuu na nkenke asụsụ nke mere na mobile na saịtị bụ pụtara ìhè, ma digestible.
Imnwetacha ego aka
2016 tụbara plethora nke teknụzụ ọhụụ na usoro anyị maka azụmaahịa iji tụlee. Agbanyeghị, na-abanye n'ime afọ ọhụrụ, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịkpachara anya ịghara itinye ego na teknụzụ maka teknụzụ. Maka 36% kwuru na anyị Ndị na -emebi dijitalụ na-ekwu na ha kwenyere na azụmaahịa ha kwesịrị itinyekwu ego na dijitalụ iji mepụta ihe ọhụrụ, ọ dị mkpa na itinye ego ndị a mgbe emechara nyocha nke ọma mgbe azụmaahịa ahụ nwere nka iji bulie ego ahụ naanị ma ọ bụrụ na ekpebiela iji ihe eji eme ihe.
Budata Nkwupụta Mgbasa Ozi Digital
Na-enweghị echiche a, azụmahịa na-efu ego n'ihe ha na-enweghị ikike ụlọ ịkwado. Ọmụmaatụ, 53% nke ndị ahịa kwenye na ị na-agbasi mbọ ike iji sọftụwia akụrụngwa azụmaahịa karịa ego mbụ. Na mgbakwunye, ina ndị ahịa ga-anọ ebe ahụ. Ọ bụrụ na ha enweghị mmasị na ịme teknụzụ ọhụụ iji soro gị na-emekọrịta ihe, ọ ga-abụ ego efu.
Iji banye 2017 site na iji usoro dijitalụ siri ike, ndị na-ere ahịa kwesịrị iji ihe ndị a niile n'uche. Idebe onye ahịa n’etiti mkpebi niile, ebe ọ na-aga n’ihu ịtụle uru nke usoro na teknụzụ ọhụụ nwere ike iweta, pụtara na ụlọ ọrụ nwere ike iwulite mmekọrịta siri ike na onye ọrụ ha ikpeazụ ma mekwaa nkwado iguzosi ike n’ihe.
Tags: 20162017ahịaMobile na Mbadamba ụrọuk
Co-guzobere azụmahịa mgbanwe dijitalụ, Otu. Squiz bụ otu n'ime ndị na-eweta ihe ntanetị nke ụwa. Ọ na-ajụ, na-ewuli ma na-ejikwa weebụsaịtị na ngwa ịntanetị na-eji isi mmalite mepere emepe Ahụmịhe Weebụ Web, Squiz Suite.
Ihe doro anya na-awakpo Buzzwordsmithiness On Contact
Dec 20, 2016 na 9:57 PM
Egwu post! Daalụ maka ịkekọrịta.